Zimbabwe's Chamisa says he'll testify to inquiry only if president does - Citizentv.co.ke
Published on: November 15, 2018 21:00 (EAT)
Chamisa said he and former Finance Minister Tendai Biti were among the leaders of the opposition Movement for Democratic Change (MDC) who on Thursday received letters calling them to appear before the commission when it resumes hearings next week.
Police chief Godwin Matanga on Tuesday told the commission that Chamisa could be arrested any time for inciting violence.
Zimbabwean opposition leader Nelson Chamisa said on Thursday that he would only testify before an inquiry into post-election violence that killed six people in August if President Emmerson Mnangagwa did the same.
Video from the August 1 protests showed soldiers, some with their faces obscured by camouflage masks, opening fire with automatic weapons.
Chamisa said he and former Finance Minister Tendai Biti were among the leaders of the opposition Movement for Democratic Change (MDC)who on Thursday received letters calling them to appear before the commission when it resumes hearings next week.
Chamisa said this was part of the pressure put on him to recognize Mnangagwa as the president.